Warbixin Guud oo ku Saabsan Khasaarihii Ka Dhasay Raxmaadkii Shaley iyo Xaley ka Da’ay Magaalada Caasimada Hargeysa iyo Doorkii Ciidanka Dab-demiska | Somaliland Post
Home News Warbixin Guud oo ku Saabsan Khasaarihii Ka Dhasay Raxmaadkii Shaley iyo Xaley...
Warbixin Guud oo ku Saabsan Khasaarihii Ka Dhasay Raxmaadkii Shaley iyo Xaley ka Da’ay Magaalada Caasimada Hargeysa iyo Doorkii Ciidanka Dab-demiska
Ciidanka Dab-demiska Caasimada Hargeysa ayaa maalintii shalay ilaa habeenimadii ka hawlgalayay khasaarayaal kala duwan oo ay keeneen Roobab waaweyn oo ka da’ay magaalada hadaba, warbixinta samata bixinta khasaarihii ka dhashey raxmaadkii eebe ee shaley iyo xaley ku hoorey Caasimada Hargeysa oo faahfaahsan waxay kala tahay kala tahey :-
Samata bixinta Nolosha iyo Hantida.
1- Degmada Axmed Dhagax aaga masjid Bootaan waxa laga samata bixiyey 5 caruura oo dugsi waxbarasho laga soo fasaxey.
2- Dagmada 26 june marinka biyaha ee Indha-Deero Malls waxa laga samata bixiyey Hooyo,aabo iyo 6 caruura oo ay dhaleen iyo gaadhigoodii.
3- Dagmada 26 June Dooxa weyn ee Hargeisa waxa laga samata bixiyey 5 qof gaadhigoodiina daadka ayaa qaadey.
Wadarta guud ee dadka daadka laga reebey waa 18 Qof.
1- Degmada 31 xaafada Cabdi Iidaan waxa ku dumey guri waxana ku dhaawacmey laba caruura iyo hooyadood.
2- Degmada 31 may xaafada boqol-jire waxa ku dumay 10 guri oo kala duwan.
3- Degmada 31 mey xaafada sheikh Cumar waxa ku dumey 37 Guri.
4- Degmada Ibraahim Koodbuur xaafadaha Grand-Haadi Hotel ka danbeeya waxa ku dumey 5 guri waxana ku dhintey 3 qof 2 qofna waa dhaawac ah.
5- Degmada ibraahim koodbuur xaafada jigjiga yar masjid Daarul iimaan waxa ku dumey guri jiingad ah.
6- Degmada ibraaim koodbuur Macradka baabuurta iibiya ee Xandule Motors waxa ku dumey hadhkii gaadiidka waxana uu ku fadhiistey 13 gaadhi.
7- Degmada ibraahin koodbuur xaafada xero awr waxa ku dumay laba bakhaar oo ay leedahay shirkad Jameeco weyn.
8- Degmada Gacanlibaax dhismaha EX Tiyaatarka Hargeisa waxa soo daatey sakhaaradaha dhismaha oo guud ahaanba xanibey socodka gaadiidka mudo 5 saacadood ah.
9- Degmada Gacan libaax aaga fooqa buubaa geed ayaa ku fadhiistey meherad ganacsi waana laga jiidey.
Wadarta Guud ee Guryaha iyo goobaha Ganacsiga waxyeeladu gaadhay 49 guri keliya
Caqabadaha kala duwan ayaa jira kuwaasoo kala ah :
1- Dhaawacyo iyo burbur hanti aan sugneyn oo meelo kala duwan wali laga soo sheegayo.
2- Saxmada Gaadiidka oo ay wadayaashu soconayaan iyada oo ay jiraan daadad iyo dabeylo.
3- Biraha boodhadhka, leydhka iyo jiingadha dhismayaasha kumeel gaadhka ah oo khasaare kala gedisan keeney.
4- Wacyi galin la,aan bulshada ka heysata ka gabashada masiibooyinka ee xiliyada dabeylaha iyo daadadkuba jiraan.
5- Wada shaqeyn la,aan ka jirta shirkadaha leydhka qaarkood kadib markii xaalad degdeg ah lagu wargaliyey.
Baahida Degdeg ah:
1- Kaalmo caafimaad oo loo fidiyo dadkaan dhakhtarka weyn lasoo gaadhsiin.
2- Gargaar bani aadanimo oo la gaadhsiiyo dadka guryuhu ka dumeen gaar ahaan raashinka, bustayaasha dhaxanta iyo dib u dhiska hoygooda.
3- Wax ka qabashada jidadka iyo marinada biyaha ee roobku wax yeeley.
4- Wax ka qabashada wadayasha biimada ah iyaga oo rakaab sida.
Ugu dambayn Ciidanka Dab-demisku wuxuu Talo soo jeedin u soo jeedinayaa dhamaan Cid kasta oo ay khusayso ka hortagga iyo wax ka qabashada xaaladahan.
1- In la sameeyo miis iyo gudi si wada jir ah uuga hawl gala xaaladaha degdeg ah si loo mideeyo helitaanka xogta dhiilada iyo hogaaminta gurmadka qeybihiisa kala duwan.
2- Sixitaan lagu sameeyo saxmada gaadiidka xiliga gurmadka, helitaanka shaqaalaha shirkadaha leydhka, wax ka qabashada biraha boodhadhka iyada oo uu go,aan hore ka soo saarey Madaxweynihii hore Mudane Axmed Max,ed Max,ud Siilaanyo.
3- In la xakameeyo goobaha aan laga taalbi Karin xiliyada biyaha daadku rogmanayaan.
Gabagabadii waxaa Ciidanka Dab-demisku u mahadnaqayaa Duqa Caasimada Hargeisa, Badhasaabka gobolka M/jeex, Cisbitaalka guud ee Hargeisa, Ciidanka Booliska qeybihiisa kala duwan.iyo Shirkada Sompower kuwaasoo dhamaantood kala qayb qaatay Ciidanka Dab-demiska gurmadkii shalay ilaa xalay ka dhacay Magaalada Hargeysa.